Justnow news – Page2– Just another WordPress site
ကွေးစညျဘာကွောငျ့တီးသငျ့တာလဲ..? ဘုရားရှိခိုးပွီးတိုငျး ကွေးစညျတီး ပွီး အမြှဝပေါ။ ကွေးစညျသညျ သူတျောကောငျးတို့၏နားတှငျ အေးမွသောအသံရှိ၏။ သူယုတျမာ(နာနာဘာဝ)တို့၏နားတှငျပူလောငျ၏။ ကောငျးသော သူတို့သညျ သာဓုချေါပွီး မကောငျသောသူတို့သညျအဝေးသို့ပွေး၏ ကွေးစညျသညျ အအေးဓာတျကိုပေးသဖွငျ့ ကိလသောအပူကို ငွိမျးစပေါသညျ။ မိမိမှာ ကံဆိုးနပွေီ ကံ ညံ့ နပွေီ ထငျလြှငျ ပို၍ တီးသငျ့သညျ ကိုယျ့ကို မကောငျးကွံမဲ့ သူတှကေို ဝေးကှာ သှားစပေါတယျ။ အမြှဝရောတှငျလဲ လူ၏အသံအားဖွငျ့ အမြှဝသေညျ့အခါ အဝေးသို့မရောကျနိုငျပါ။ကွေးစညျသညျ အဝေးသို့ ပဲ့တငျသံဖွငျ့ သှား နိုငျ သညျ အဝေးတှငျရှိသော နတျ လူတို့ကွားနိုငျပါသညျ သာဓုချေါနိုငျသညျ။ ကွေးစညျတီးပွီး မတ်ေတာပို့အမြှဝလြှေငျပို၍ ထိရောကျပါသညျ။ ဘုရားရှိခိုးပွီးတိုငျး ကွေးစညျတီး၍အမြှဝပေါ။ Credit – မူရငျး [unicode] ကှေးစညဘြာကှောင့တြီးသင့တြာလဲ..? ဘုရားရှိခိုးပှီးတိုငြး ကှေးစညတြီး ပှီး အမွှဝပေါ။ ကှေးစညသြညြ သူတောကြောငြးတို့၏နားတှငြ အေးမှသောအသံရှိ၏။ သူယုတမြာ(နာနာဘာဝ)တို့၏နားတှငပြူလောငြ၏။ ကောငြးသော သူတို့သညြ သာဓုခေါပြှီး မကောငသြောသူတို့သညအြဝေးသို့ပှေး၏ ကှေးစညသြညြ အအေးဓာတကြိုပေးသဖှငြ့ ကိလသောအပူကို ငှိမြးစပေါသညြ။ မိမိမှာ ကံဆိုးနပှေီ ကံ ညံ့ နပှေီ ထငလြွှငြ ပို၍ တီးသင့သြညြ ကိုယ့ကြို မကောငြးကှံမဲ့ သူတှကေို…
နံနကျ အိပျယာထခြိနျတှငျ မိမိတို့အိမျတှငျ ရှိသောမွတျစှာဘုရားကိုမကျြနှာသဈတျောရေ၊သောကျ တျောရခေမျြးကပျပါ။မကျြနှာသဈတျောရနှေငျ့ သောကျတျောရခေမျြး ကပျလှူသောအခါ ဘဒ်ဒ ကမ်ဘာတှငျ ပှငျ့တျောမူသော သဗ်ဗညုတမွတျစှာဘုရားကို ဘုရားတပညျ့တျော၊ တပညျ့တျောမသညျ မကျြနှာသဈတျောရနှေငျ့ သောကျတျောရခေမျြးကို သဒ်ဒါကွညျဖွူစှာ နိဗ်ဗာနျရညျမှနျး လှူဒါနျးပါသညျ အရှငျမွတျဘုရား ….။ဤကဲ့သို့လှူဒါနျးရသော ကုသိုလျကံ စတေနာကွောငျ့ ဘုရား တပညျ့တျော၊ တပညျ့တျောမ၏ စိတျသညျ တဈနတေ့ာလုံးဤရကေဲ့သို့အေးမွပါစေ။ပူပငျသောက ဟူသမြှသညျ ပပြောကျ၍ ဤရကေဲ့သို့ အေးခမျြးမှုရရှိပါစေ …။ ဘုရားတပညျ့တျော၊ ဘုရားတပညျ့တျောမနှငျ့ ကွုံရဆုံရသမြှသော ခုနဈရကျသားသမီးအပေါငျး၏ ဘဝသညျလညျးဤရကေဲ့သို့အေးခမျြးကွပါစေ …။ ဘုရားတပညျ့တျော၊ တပညျ့တျောမ၏ ယ်ခုပစ်စုပ်ပနျ၊ အနာဂတျ ဘဝတဈလြှောကျလုံး စိုးရိမျပူပငျကွောငျ့ကွမှုအစုစုတို့သညျ ဤမကျြနှာသဈတျောရေ၊ သောကျတျောရခေမျြးကပျလှူပူဇျောလှူဒါနျးရသောစတေနာသဒ်ဒါတရားကွောငျ့ ဘဝတဈလြှောကျလုံးမပူမပငျ မကွောငျ့မကွ အေးခမျြးစှာနထေိုငျဖွတျသနျးနိုငျပါစသေား အရှငျမွတျဘုရား …။နစေ့ဉျအမွဲတမျး နံနကျတိုငျး ယုံကွညျစှာပွုလုပျပေးပါ။ယုံကွညျမှုဖွငျ့ ကိုးကှယျဆညျးကပျမှုသညျ ယခု ဤဘဝတှငျသာ မကဘဲ နောငျဘဝမြားစှာတညျငွိမျအေးခမျြးပွီး နောငျပှငျ့တျောမူမညျ့ အရိမတ်ေတယမြွတျစှာဘုရားရှငျကို ဖူးတှနေို့ငျပွီး သာသနာပွုနိုငျသောပုဂ်ဂိုလျထူးပုဂ်ဂိုဟျမွတျမြားဖွဈကွပါစေ …။ Credit ဆရာရှထှေနျးစိနျ (မတ်ေတာရှငျသစ်စာအလငျး) [unicode] နံနကြ အိပယြာထခွိနတြှငြ မိမိတို့အိမတြှငြ ရှိသောမှတစြှာဘုရားကိုမကွနြှာသဈတောရြေ၊သောကတြောရြခမြွေးကပပြါ။မကွနြှာသဈတောရြနှငြေ့ သောကတြောရြခမြွေး ကပလြှူသောအခါ ဘဒျဒကမျဘာတှငြ ပှင့တြောမြူသော သဗျဗညုတမှတစြှာဘုရားကို ဘုရားတပည့တြော၊ တပည့တြောမြသညြ မကွနြှာသဈတောရြနှငြေ့ သောကတြောရြခမြွေးကို…
ဆုတောငျး တိုငျး ပွညျ့စုံနိုငျကွပါစေ…။ဆုတောငျးတှကေ…ဆုတောငျးတိုငျး မပွညျ့ပါဘူး။မွတျစှာဘုရား ဟောကွားထားတဲ့ အင်ျဂါ(၅)ခကျြနဲ့ပွညျ့စုံမှသာ ဆုတောငျးပွညျ့တာပါ။ တကယျလို့ ဘဝမှာ လိုအပျခကျြ တဈခုခုရှိလို့ ဆုတောငျးတော့မယျဆိုရငျအင်ျဂါ(၅) ခကျြကို ပွညျ့စုံအောငျ လုပျရပါမယျ။မွတျစှာဘုရားရှငျက…သဒ်ဓါ သီလ သုတ စာဂ ပညာထိုအင်ျဂါ (၅)ခကျြနဲ့ ပွညျ့စုံရငျ နောကျဘဝအတှကျလိုခငျြတာ ဆုတောငျးရငျပွညျ့စုံပါတယျလို့ ဟောကွားခဲ့ပါတယျ။ အင်ျဂါ (၅) ခကျြကတော့ – ၁။ သဒ်ဓါဆိုတာက=ရတနာသုံးပါးရယျ ကံရယျ ကံရဲ့အကြိုးရယျကို ယုံကွညျတာပါ။ ၂။ သီလဆိုတာက=အောကျထဈဆုံး ငါးပါး သီလဆို အဆငျပွပေါတယျ။ ၃။ သုတဆိုတာက=အကွားအမွငျ ဗဟုသုတပါ။စာတှေ ဖတျလို့ပဲ ဖွဈဖွဈ တရားတှေ နာလို့ပဲ ဖွဈဖွဈအခငျြးခငျြး ပွောပွလို့ပဲ ဖွဈဖွဈ သိတဲ့ ဗဟုသုတပါ။ ၄။ စာဂဆိုတာက=ပေးကမျး စှနျ့ကွဲမှု ဒါန ကုသိုလျပါ။ ၅။ ပညာဆိုတာက=အကွောငျးအကြိုး အကောငျး အဆိုးကုသိုလျ အကုသိုလျကိုခှဲခွားသိတဲ့ ပညာပါ။တကယျလို့မြား…ဘဝမှာ လိုအပျခကျြ တဈခုခု ရှိရငျဆုတောငျးတော့မယျ ဆိုရငျအထကျပါ အင်ျဂါ(၅)ခကျြကို အရငျဆုံး ပွညျ့စုံအောငျ ကွိုးစားပါ။ပွညျ့စုံပွီ ဆိုရငျတော့ ဆုတောငျးတှေ ပွညျ့ပါပွီ။ဘာပဲပွောပွော လိုခငျြတဲ့ ဆုပဲ တောငျးတောငျးမလိုခငျြတဲ့…
ည အိပျယာ မဝငျခငျ သရဏဂုံတညျပွီးမှ အိပျကွပါ။သရဏဂုံတညျသောသူသညျ ထိုဘဝမှ စု တသေောအခါ တဈဘဝတာ တညျခဲ့သော သရဏဂုံ ကုသိုလျကွောငျ့ ……(၉၁)ကမ်ဘာ အပါယျလေးပါးသို့ မကရြောကျရခွငျး။အကွိမျ(၈၀) သိကွားမငျးဖွဈရခွငျး။(၇၅)ကွိမျ စကွာမငျးဖွဈရခွငျး။ရိုးရိုးပဒသေရာဇျ ဧကရာဇျဘုရငျအဖွဈ အကွိမျကွိမျဖွဈနခွေငျး။အဆုံးဘဝတှငျ မွတျ စှာဘုရားသာသနာ၌ (၇)နှဈသားအရှယျမှာပငျ ရှငျသာမဏအေဖွဈ ခံယူ၍ သရဏဂုံအဆုံး၌ ရဟန်တာဖွဈခွငျး။စြေးဝယျသောအခါ တဈပိဿာဝယျလြှငျ တဈပိဿာရ၏။စြေးသညျက တဈပိဿာအပွညျ့အပွငျ မတ်ေတာလကျဆောငျ ထညျ့ပေးလြှငျ အဆဈပါရ၏။ထို့အတူ သရဏဂုံတညျလြှငျ အကြိုးရငျး အကြိုးဖြားဟူ၍ နှဈမြိုးရ၏။ ယခုဖျောပွပွီးသညျကားတို့ကား အကြိုး အရငျးဖွဈ၏။ တဈပိဿာဝယျ၍ တဈပိဿာရခွငျးမြိုး တဈရာဖိုးဝယျ၍ တဈရာဖိုးရခွငျးမြိုးပငျဖွဈ၏။အဆငျ့နှငျ့တူသညျ့ အကြိုးဖြားဟုချေါသော ကောငျးကြိုး(၈)မြိုးကိုလညျး ဘဝဆကျတိုငျး ရနိုငျသေး၏။ထိုကောငျးကြိုး(၈)မြိုးကိုလညျး အပါဒါနျပါဠိတျောမှာ ဟောတျောမူထား၏။ သရဏဂုံတညျခဲ့သူသညျ လူ နတျ ဗွဟ်မာ မညျသညျ့ဘဝသို့ ရောကျရောကျ – ၁။ လူအမြား၏ ပူဇျောခံရခွငျးကို ခံယူရသညျ။ ၂။ ထူးထူးခွားခွား သူတကာထကျ ဉာဏျကောငျးသညျ။ ၃။ သူ၏အလိုသို့ အမြားက လိုကျပါရသညျ။ ၄။သတ်တဝါအားလုံးက နှဈသကျသညျ။ ၅။ သတ်တဝါအားလုံးက ခဈြခငျသညျ။ ၆။ ရှအေဆငျးကဲ့ သို့ လှပသညျ။ ၇။ ကြျောစောထငျရှားသညျ။ ၈။…
ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျတို့ သိထားသငျ့တဲ့ရစေကျခလြှူခွငျးနှငျ့ ရစေကျမ ခပြဲလှူခွငျး အကြိုးကှာခွားခကျြ
ရစေကျမခဘြဲ လှူတာကို “ဒါန”လို့ ချေါတယျ။ရစေကျခခြွငျးကို “ပတ်တိဒါန”လို့ ချေါတယျ။ရစေကျမခဘြဲလှူလြှငျ ဒါနအကြိုးသကျသကျမြှကိုသာ ရတယျ။ရစေကျခတြဲ့အတှကျ ဒါနအကြိုးမြှ မကဘူး ၊ ပတ်တိဒါနအကြိုးကိုလညျး ရတယျ။ပတ်တိဒါနအကွောငျးကို အနညျးငယျ ပွောပွဦးမယျ။ပတ်တိ+ဒါန ဆိုတဲ့ ပုဒျနှဈပုဒျမှာပတ်တိဆိုတာ မိမိထံ ကုသိုလျရောကျလာတာကို “ပတ်တိ”လို့ချေါတယျ။ဒါနဆိုတာကတော့ ပေးခွငျး။ဒါကွောငျ့ မိမိထံ ရောကျလာတဲ့ ကုသိုလျကို သူတဈပါးထံ အမြှပေးဝခွေငျးကို ပတ်တိဒါန လို့ချေါတယျ။ ရှေးဦးစှာ တဈစုံတဈခုသော ဝတ်ထုကို လှူတယျ။ ထိုသို့ လှူတဲ့အတှကျ ရောကျလာတဲ့ ဒါနစတေနာကို “ပတ်တိ”လို့ ချေါတယျ။မိမိထံရောကျလာတဲ့ ဒါနစတေနာကို ကွားကွားသမြှ သာဓုချေါတျောမူကွပါလို့ဝငှေပေးတဲ့ စတေနာကို “ပတ်တိဒါန”လို့ ချေါတယျ။ ကိုယျရထားတဲ့ကုသိုလျကို သူတဈပါးတို့အား ပေးလိုကျလြှငျကိုယျ့မှာကုသိုလျ ကုနျသှားရော့လားလို့ တှေးမှားစရာ ရှိတယျ။မီးတိုငျတဈတိုငျ ထှနျးထားရာက မီးတိုငျအမြား မီးလာကူးတဲ့အတှကျ မူလမီးရဲ့ အရောငျအလငျးဟာ လြော့မသှားသညျ့အပွငျ အလငျးရောငျ ပိုလာသလို မူလကု သိုလျရှငျမှာ ကုသိုလျ မကုနျတဲ့အပွငျ ပတ်တိဒါန ကုသိုလျအကြိုးကိုပငျ ထပျပွီးရသေးတဲ့အတှကျ ရစေကျမခဘြဲ လှူလြှငျ ဒါနအကြိုး သကျသကျမြှသာ ရတယျ။ရစေကျခြ အလှူပေးတဲ့အတှကျ ပတ်တိဒါနအကြိုးကိုပါ ရတယျလို့ မှတျသားသငျ့တယျ။ရစေကျခစြဉျ ခံယူရမညျ့စိတျထားက᠌᠌᠌ ရုပျတရား နာမျတရား မှနျသမြှ ဖွဈပွီး ပကျြတတျတာခညျြးမို့မမွဲတဲ့…
အသည်းအဆီဖုံးခြင်းကို လျော့ကျစေနိုင်တဲ့ ပင်မှည့်သီးဖျော်ရည်
October 11, 2020 author Comments0Comment
ဘယ်သူတွေအသည်းအဆီဖုံးနေကြသလဲ။ လူတိုင်းလိုလိုအသည်းအဆီဖုံးနေကြသူချည်းပါပဲ။ လူတစ်ယောက်မှာရှိသင့်တဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ထက် ပိုနေတဲ့အဆီရာခိုင်နှုန်းအတိုင်းအသည်းမှာလည်း အဆီတွေများနေလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီအဆီတွေကိုချပေးဖို့လိုပါတယ်။ အသည်းမှာ အဆီတွေများနေရင်အသည်းကကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ လူဝကြီးတွေအလုပ်မလုပ်နိုင်ကြသလို Fatty Liver လည်းအလုပ်ကောင်းကောင်းမလုပ်ဘူး။အသည်းကအဆီတွေချပေးဖို့အတွက်သဘာဝနည်းတွေထဲမှာ ပင်မှည့်သီးကလည်းထိပ်တန်းကပါဝင်ပါတယ်။ ပင်မှည့်သီးကိုအနှစ်ထုတ်ပြီး Blenderနဲ့ ကြိတ်ပါ။ ပြီးရင်ဆန်ကာနဲ့စစ်ပြီးနေ့စဉ်သောက်ပေးပါ။ အသည်းကအဆီတွေတဖြည်းဖြည်းကျသွားလိမ့်မယ်။ ပင်မှည့်သီးကအသည်းကိုသာမကBodyတစ်ခုလုံးကိုလည်း အဆီချပေးပါသေးတယ်။Detoxကောင်းကောင်းလုပ်ပေးတယ်။ ဝမ်းကိုအလွန်မှန်စေတယ်။ဝမ်းမကျန်အောင်အူတွေကိုရှင်းပေးတယ်၊ Antioxidant အားအလွန်ကောင်းလို့နုပျိုစေတယ်။ ကင်ဆာဆဲလ်တွေကိုလျှော့ချပေးတယ်။ ကော်လက်စတြော LDL ကိုလျှော့ချပေးတယ်။ ခါးသေးပြီးသွယ်လျစေတယ်။ သွေးတိုးကိုကျစေတယ်။နှလုံးရောဂါကိုကာကွယ်ပေးတယ်။ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကိုသက်သာစေတယ်။ မျက်စိအမြင်ကိုကြည်လင်စေတယ်။မနက်အိပ်ယာထရင်ပေါ့ပါးလန်းဆန်းစေတယ်။ စိတ်တည်ငြိမ်ပြီးကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေတယ်။ ဗီတာမင်စီနဲ့ပိုတက်စီယမ်တွေအများကြီးပါတယ်။ သူ့ရဲ့အနံ့အရသာလေးကစိတ်ချမ်းသာစေတယ်။ ရင်ကိုအေးမြစေတယ်စသည်ဖြင့်ကောင်းကျိုးတွေ အများကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အခုလိုပင်မှည့်သီးလှိုင်လှိုင်ထွက်ချိန်မှာ ခြင်းလိုက်ဝယ်ပြီးတစ်မိသားစုလုံးသောက်ပေးသင့်ပါတယ်။ ရရှိမယ့်အကျိုးကျေးဇူးကတော့များလှပါတယ်။ မူရင်းရေးသားသူကို လေးစားစွာဖြင့် Credit ပေးပါတယ်။ [unicode] ဘယျသူတှအေသညျးအဆီဖုံးနကွေသလဲ။ လူတိုငျးလိုလိုအသညျးအဆီဖုံးနကွေသူခညျြးပါပဲ။ လူတဈယောကျမှာရှိသငျ့တဲ့ကိုယျအလေးခြိနျထကျ ပိုနတေဲ့အဆီရာခိုငျနှုနျးအတိုငျးအသညျးမှာလညျး အဆီတှမြေားနလေရှေိ့ပါတယျ။ အဲဒီအဆီတှကေိုခပြေးဖို့လိုပါတယျ။ အသညျးမှာ အဆီတှမြေားနရေငျအသညျးကကောငျးကောငျးအလုပျမလုပျနိုငျတော့ဘူး။ လူဝကွီးတှအေလုပျမလုပျနိုငျကွသလို Fatty Liver လညျးအလုပျကောငျးကောငျးမလုပျဘူး။အသညျးကအဆီတှခေပြေးဖို့အတှကျသဘာဝနညျးတှထေဲမှာ ပငျမှညျ့သီးကလညျးထိပျတနျးကပါဝငျပါတယျ။ ပငျမှညျ့သီးကိုအနှဈထုတျပွီး Blenderနဲ့ ကွိတျပါ။ ပွီးရငျဆနျကာနဲ့စဈပွီးနစေ့ဉျသောကျပေးပါ။ အသညျးကအဆီတှတေဖွညျးဖွညျးကသြှားလိမျ့မယျ။ပငျမှညျ့သီးကအသညျးကိုသာမကBodyတဈခုလုံးကိုလညျး အဆီခပြေးပါသေးတယျ။Detoxကောငျးကောငျးလုပျပေးတယျ။ ဝမျးကိုအလှနျမှနျစတေယျ။ဝမျးမကနျြအောငျအူတှကေိုရှငျးပေးတယျ၊ Antioxidant အားအလှနျကောငျးလို့နုပြိုစတေယျ။ ကငျဆာဆဲလျတှကေိုလြှော့ခပြေးတယျ။ ကျောလကျစတွော LDL ကိုလြှော့ခပြေးတယျ။ ခါးသေးပွီးသှယျလစြတေယျ။ သှေးတိုးကိုကစြတေယျ။နှလုံးရောဂါကိုကာကှယျပေးတယျ။ ပနျးနာရငျကပျြရောဂါကိုသကျသာစတေယျ။ မကျြစိအမွငျကိုကွညျလငျစတေယျ။မနကျအိပျယာထရငျပေါ့ပါးလနျးဆနျးစတေယျ။ စိတျတညျငွိမျပွီးကောငျးကောငျးအိပျပြျောစတေယျ။ ဗီတာမငျစီနဲ့ပိုတကျစီယမျတှအေမြားကွီးပါတယျ။ သူ့ရဲ့အနံ့အရသာလေးကစိတျခမျြးသာစတေယျ။ ရငျကိုအေးမွစတေယျစသညျဖွငျ့ကောငျးကြိုးတှေ အမြားကွီးဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့အခုလိုပငျမှညျ့သီးလှိုငျလှိုငျထှကျခြိနျမှာ…
ချောင်းဆိုးလျှင် ခရေပွင့်ကိုတညလုံးရေစိမ်၊ နံနက်တွင်း ထိုရေကိုစစ်၍သောက်ပါ၊ ပျောက်၏။ ရင်ပြည့်ရင်ကယ် ကြက်ဟင်းခါးသက်စောင့်ဆေးကိုနှမ်းဆီ ပရုပ်ဆီဖြူ ဖြင့်ဖျော်၍ ရင်မှသာအယာသပ်ချပါ။ နှာပိတ်သော် ကြိတ်မှန်ရွက် ခွေးသေးပန်းရွက် နှစ်ပါးကြိတ်၊ ရှိန်းခိုနဲနဲထည့်၊ ငယ်ထိပ်မှနှာခေါင်းအထိဆေးအရည်နှင့်ဆွဲပေးပါ။ တက်လျှင် ဆင်ငိုမြက်ပြုပ်ရည်ကိုတိုက်ပါ။ အတက်ချက်ချင်းကျသွားမည်။ ရေငတ်ဝမ်းကျ ဆီးသီးအစေ့အတွင်းမှအဆန်ကို အမှုန့်ပြု၍ နွယ်ချိုနှင့်ရောပြီးစားပေးပါ။ ကင်းထိုးသော် ကင်းကိုက် ကင်းထိုး ဒဏ်ရာ ငဖြူကြီးမြစ်သွေးလိမ်းပါ။ ကြို့ထိုးလျှင် ကြက်သွန်နီကိုထန်းလျှက်နှင့်နိုင်းချင်း ကြိတ်၍စား။ ခရုသင်း ကျည်းသီးဆန်ကိုဆန်ဆေးရည်နှင့်တွဲစပ်၍ ရက်ပေါင်းများစွာစားရပါသည်။ ခြေတုန်လက်တုန်ဖြစ်လျှင်ကြိတ်မှန်ရွက်ယိုထိုးစားပျောက်၏။ ခါးနာ ခါးကိုက် ညောင်ခြေထောက်ပင်၏ နို့စေးရည်လိမ်းပေးပါ။ ငှက်ဖျားထလျှင် မြင်းခွာရွက်ရည်ကို ငရုပ်ကောင်းနှင့်အမျှစီကြိတ်၍ သောက်ပါ။ ခံတွင်းပျက်လျှင် ကြိတ်မှန်ရွက်ယိုထိုးစားပေးပါ။ ခေါင်းတခြမ်းကိုက်လျှင် ကျည်းသီးဆန်ကို ဆိတ်ကျင်ငယ်ရည်နှင့်သွေးလိမ်းပေးပါ။ စကားထစ်လျှင် နံနက်တိုင်းမြင်းခွာရွက် တစ်ရွက်နှစ်ရွက်လောက် နေ့စဉ်စားပေးပါ။ စအိုယားနာ ကြိတ်မှန်ရွက် အရည်ညှစ်၍စအိုဝတွင် သုံးလေးကြိမ်သုပ်လိမ်းပေးပါ၊ ဝမ်းတွင်းရှိ ပိုးများကျဆင်းလာပါလိပ်မည်။ ဆီးချုပ်လျှင် ငုပင်၏ အနှစိုကိုသွေး၍ ချက်အောက်မကြာခဏ လိမ်းပေးပါ။ ဆီးတစက်စက်ကျလျှင် ကြက်သွန်နီကိုပြုပ်၍ အရည်ကိုသောက်ပေးပါ။ ဆီးချုပ်လျှင် ဆီးများစေရန် ကြက်သွန်နီအစိမ်းများများ စားပေးပါ။ ဆီးအောင့်ကျောက်တည်လျှင် ကြာဟင်းရွက်ကိုနွားနို့ နှင့်သကြားရော၍ နေ့စဉ်စားပေးပါ။ ဆီးချိုဖြစ်လျှင် ခံတက်ခေါက်ကိုလေးခွက်တစ်ခွက်တင်ကျို၍ သောက်ပါ။ ဆီးအနှစ်ကျလျှင် သင်္ဘော ရွက်…
ခြေသလုံးအကြော တောင့်တင်းသူများ နှစ်ချက် ဆောင်ရွက်ပေးပါ။ ရေချိုးခါနီး ခြေဖဝါး ဆားပွတ်ပြီးမှ ရေချိုးပါ။ ( အပူထုတ် ရေချိုးနည်း လမ်းညွှန်ချက်ကို တင်ထားပြီးပါပြီ ) တောင့်တင်းတဲ့နေရာကို မန်ကျည်းရေ ကျဲကျဲနဲ့ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ညှပ်ပြီး ပွတ်ပေးပါ။ ခြေပေးပါ။ ခြေပြီးမှ ရေချိုးပါ။ အရွက် သုံးရွက်အနက် ကြိုက်တဲ့အရွက် တစ်ရွက်ကိုသုံးပါ။ ၁ = ကိုရံကြီးရွက်။ ၂ = ဗာဒံရွက်။ ၃ = ငှက်ပျောရွက် ။ ညအိပ်တဲ့အခါ သိပ်တင်းတဲ့ေ နရာကို ပတ်ပြီး အိပ်ပါ။ အရွက်ပတ်တဲ့အခါမှာ နေရောင်ထိတဲ့ဘက်၊ ချောတဲ့ဘက်နဲ့ အသားကိုထိရပါမယ်။ သူ့ကို ပတ်တော့မယ်ဆိုရင် အဘွားအသက် ကရမက်၊ အမျိုးသမီး အသက် ကရမက် ဆိုတဲ့အတိုင်း ကရမက်လိမ်းပါ။ ကရမက်က အပူစုပ်မယ်။ ပြီးမှ အရွက်ပတ်၊ အရွက်ကလည်း အပူစုပ်မယ်။ တောင့်တာ တင်းတာ အကြောင်းခံက ပူလွန်းးလို့ ။ ရာနှုန်းလျော့သွားပါလိမ့်မယ်။ ( သြ / သု ) ဆရာကြီး ဦးရန်အောင်ိ Unicode ခွေ သလုံးတောငျ့ တငျးတ တျသူ မြားအတှကျ…
ဒူးနာ၊ ခါးနာပြီး အထိုင်ခက် အထခက် နေသူများအတွက်…
ဒူးနာ၊ ခါးနာပြီး အထိုင်ခက် အထခက် နေသူများအတွက် ခါးနာခါးကိုက် ၊ဒူးနာဒူးကိုက် ၊ထိုင်ရခက်ထရ ခက်၊ လက်မောင်း လက်ဆစ် အဆစ်အမြစ် ၊အကိုက်အခဲ အားလုံးအတွက် ခါးနာ၊ ဒူးနာ၊ ထိုင်မရ ထမရ၊ ခြေကိုက်၊ လက်ကိုက်၊ လက်မောင်း လက်ဆစ်ကိုက် အာလုံး ရိုးတွင်းချဉ်ဆီ ခမ်းခြောက် နည်းပါးသွားခြင်းနဲ့အတူ အပူအောင်းအပူခို အကြောလွှဲနေတာမှန်သမျှ ဖြစ်တဲ့နေရာကို ကြက်ဆူဆီ (Castor oil ) အသားထဲ စိမ့်ဝင်နေအောင် လိမ်းပေးပါ စေးပျစ်နေခဲ့ရင် ဆီတစ်မျိုးမျိုး အနည်းငယ်ရောစပ်ပြီး ပွတ်လိမ်းပေးပါ။ ဆေးဝင်အောင်သွင်းပေးပါ။ လိမ်းတာနဲ့ ဆီသွင်းတာမတူပါဘူး။ ဆီသွင်းတယ်ဆိုတာ ဆီကို အသားထဲစိမ့်ဝင်သွားအောင် ဆီပျောက်တဲ့ထိ လိမ်းရတာပါ။ တစ်ခါလိမ်းရင် မိနစ်နှစ်ဆယ် နာရီဝက်ခန့်ကြာတတ်ပါတယ်။ ဆီပျောက်ပြီဆို နောက်တစ်ခါ ထပ်ယူပြီး ထပ်လိမ်းပွတ်သွင်း။ တစ်နေ့ကို နံနက်တစ်ကြိမ် ညတစ်ကြိမ် ပွတ်လိမ်းသွင်းလိုက်ရင် တစ်ရက် နှစ်ရက်အတွင်း သိသိသာသာ သက်သာပျောက်ကင်းသွားပါမယ်။ အတွေ့အကြုံ လက်တွေ့အရ ကြက်ဆူဆီ သာ လိမ်း ရပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဆေးရောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေမှာ ကလေး ဝမ်းနုတ်ဆေး ကြက်ဆူဆီ (Castor oil ) မေးဝယ်လျှင် ရပါတယ်။ ဗူးကြီးဗူးသေးအလိုက်…
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးကြတဲ့အခါ အများစုက ဓမ္မတာလာတဲ့ ကိစ္စကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမပြောတတ်ကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ရာသီသွေးအခြေအနေ တစ်ခုခုထူးခြားတာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးမှာလည်း သက်ရောက်မှုရှိနေတယ်ဆိုတာကို သတိပြု ဆင်ခြင်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရာသီသွေးဆင်းတာဟာရှက်စရာမဟုတ်သလို ရာသီသွေးအမျိုးအစား အလိုက်သိနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေအကြောင်း ဗဟုသုတအနေနဲ့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ပန်းရောင်သမ်းနေရင် ရာသီသွေးဟာပုံမှန်ဆင်းနေကျအရောင်ထက် သွေးအရောင်ဖျော့ပြီး ပန်းရောင်ဘက်သမ်းနေတယ် ဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အမဟော်မုန်းနည်းလွန်းနေ တယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာပါပဲ။ အဲဒီလို ရာသီသွေးပန်းရောင်သမ်းတာဟာ မကြာခဏဖြစ်တယ်၊ သွေးအရောင်ဟာသိသိသာသာဖျော့လာတယ် ဆိုရင် အရိုးပွရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတာကို သတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီသွေးကျဲလွန်းရင် သွေးအရောင်ဖျော့လွန်းပြီး ရာသီသွေးဟာခပ်ကျဲကျဲဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် အာဟာရမမျှတဘူးဆိုတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပြီး သားအိမ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်ခြေရှိလို့ စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရမ်းကြီး လည်းစိတ်မပူပါနဲ့၊ သားအိမ်ပြွန်ကင်ဆာ၊ သားအိမ်ကင်ဆာဟာ တခြားသားဖွားမီးယပ်ကင် ဆာရောဂါတွေထက်စာရင် ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေ ၂ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလိုအခြေ အနေမျိုးမှာ သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန်နဲ့သေချာပြသပြီး ကာကွယ်ထားနိုင်ပါတယ်။ အညိုရင့်ရောင်ပြောင်းနေရင် ရာသီသွေးအရောင်က အညိုရင့်ရောင်ဖြစ်နေတာဟာ လစဉ်ဓမ္မတာလာတဲ့အခါ သွေးကုန်အောင် မဆင်းဘဲ သားအိမ်ထဲမှာ အချိန်ကြာမြင့်စွာကျန်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် ဘာမှသိသိသာသာထိခိုက်မှုမရှိပေမယ့် အရက်သောက်လွန်းတဲ့အမျိုးသားတွေ၊ ဆေးလိပ်အလွန်အကျွံသောက်လွန်းတဲ့အမျိုးသားတွေ ချွေးထွက်ရင် အရက်နံ့၊ ဆေးလိပ်နံ့နံသလိုမျိုး ရာသီသွေးကျန်တဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်း အနံ့အသက်မကောင်းတဲ့ကိုယ်နံ့၊ ချွေးနံ့တွေထွက်တတ်လို့…